Kpachara anya maka ịdebanye ọtụtụ ederede nchịkọta Google | Martech Zone
Kpachara anya maka ịdebanye ọtụtụ ederede nchịkọta Google
Tuesday, October 2, 2012 Sọnde, Septemba 8, 2013 Douglas Karr
Site na ijikọ ọnụ nke ngwaọrụ na ọtụtụ sistemụ njikwa ọdịnaya, anyị na-ahụ ọtụtụ ndị ahịa anyị nwere nsogbu na ntinye akwụkwọ Google Analytics ka etinyere na ibe ọtụtụ oge. Nke a na-ebibi gị nchịkọta, na - akpata nnukwu ịkọ banyere ndị ọbịa, peeji nke ọ bụla ma ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara inwe ọnụego.
Naanị taa, anyị nwere onye ahịa nke ejiri plugins 2 kwalite ma hazie iji tinye edemede Google Analytics na blọọgụ ha. Ma ngwa mgbakwunye ahụ enyochaghị iji hụ ma enwere ederede ederede! Ihe si na ya pụta bụ na a na-akọkarị nleta na ọnụego bounce ha bụ ihe dịka 3%. Ọ bụrụ na ọnụego bounce gị gbadaa n'okpuru 5%, nwee obi ike na ị nwere nsogbu na ọtụtụ ederede na ibe gị.
E wezụga na nchịkọta, olee otu ị ga-esi mara ma ị meela nke a? Otu usoro bụ naanị ilele peeji nke ibe gị wee chọọ ga.js. Ọbụna ma ọ bụrụ na ịchọrọ nyochaa saịtị ahụ otutu akaụntụ Google Analytics, enwere otu edemede.
Wayzọ ọzọ bụ imepe ngwa ndị nrụpụta gị na ihe nchọgharị gị wee lelee nkwukọrịta netwọkụ mgbe ịmechara akwụkwọ ahụ. You na-ahụ ederede ga.js ka a na-arịọ karịa otu oge?
Nchịkọta Google na-arụ ọrụ site na itinye edemede nke na-achịkọta ozi niile, chekwaa ozi ahụ na kuki ihe nchọgharị ma zipụ ya na sava Google site na ihe oyiyi arịrịọ. Mgbe edere edemede ahụ karịa otu oge, mgbe ụfọdụ ọ na-edegharị kuki, na-eziga ọtụtụ ihe oyiyi na sava. Ọ bụ ya mere ụba ọnụego dị oke ala… ọ bụrụ na ị gaa karịa otu peeji na saịtị, ị adịghị ibiaghachi. Ya mere,… ma ọ bụrụ na n'ihendesịta na-firing ihe karịrị otu ugboro mgbe ị gara otu na peeji nke, ọ pụtara na ị gara ọtụtụ peeji nke.
Lelee peeji gị na nke gị nchịkọta iji jide n'aka na nke gi nchịkọta edemede arụnyere na saịtị gị nke ọma, ma gbaa mbọ hụ na ị ga-ebupụ edemede ahụ karịa otu oge. Ọ bụrụ na ịmee, data gị ezighi ezi.
Tags: ụba ọnụegogaga.jsGoogle Analytics
Google weputara Google Tag Manager
Ọkt 3, 2012 na 3:32 AM
Ekele, aga m edetu na nke a. Echere m na nke a bụ ihe kpatara na ecommerce saịtị m enweghị okporo ụzọ na-aga na akụkọ nchịkọta ya. ederede google dị iche na koodu nsuso dị na akụkọ nchịkọta google ya. ekele di.
Nov 14, 2013 na 6:21 AM
Ndewo Douglas, oke nghọta. Enwere m ụdị nsogbu ahụ kemgbe amalitere m ụfọdụ nnwale na Google Tag Manager izu ole na ole gara aga: 4 Page / Visits 🙂 na ibiaghachi azụ ugbu a na 0.47% 😀
Gbaso post gị, lee nsonaazụ m:
1.Scripts: Enwere 1 ga.js (M zigara naanị koodu nke nchịkọta na Tag Manager n'ime saịtị m). Enweghị m ike ịhụ na edemede nke abụọ (Tag Manager) ọ bụla maka ga.js mana naanị gtm.js. Enweghị m koodu ọ bụla naanị ndị ahụ ejiri 2 tinye ọnụ (nyocha mbụ, mgbe ahụ TM), yabụ enweghị m mkpa iji ngwa, agbanyeghị m enyocha ya na firebug.
2. Na Tag njikwa njikwa m kere naanị otu ihe omume (otu oge nke ihe e kere eke, otu oge nke mmalite br idobe). Ihe omume a na - arụ ọrụ dịka Onye na - ege ntị na - ege ntị maka Njikọ Ọpụpụ na ọ bụ otu ihe ahụ James Cutroni dụrụ ọdụ na blọọgụ ya. Mana emere m obere mgbanwe: Otu bụ Non-Interaction Hit etinyere na Eziokwu (nke ahụ ekwesịghị ịpịa ọnụego ibiaghachi?) Mana emesịrị m tinye Label = onye na-ezo aka kama ịhapụ ya oghere, n'ihi na achọrọ m ịmara ebe clicks Ebee ka (Agbanyeghị m wepụrụ ya taa ka Ọ baghị uru ka m chere)
3. M ka nwere ole na ole outbound njikọ na ochie onClick = ”_ gaq.push ()” agbakwunyere ma ha niile ka na-eme ka ndị Na-abụghị mmekọrịta pịa Ezi.